author - दीपेन्द्र विष्ट - कान्तिपुर समाचार
दीपेन्द्र विष्ट का लेखहरु
सिंहको किल्लामा धावा बोल्दै मिश्र र शर्मा
दीपेन्द्र विष्ट, मंसिर ४, २०७४
प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर एक सबैको चर्चा र चासाको विषय बन्दै गएको छ । यसअघि दुइटै संविधानसभा निर्वाचनमा आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई भारी मतान्त्तरले पराजित गरेका कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहलाई यसपटक भने निकै कडा प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
विकासका नारा दिँदै घरदैलो
दीपेन्द्र विष्ट, कार्तिक ३०, २०७४
काठमाडौं क्षेत्र नं. ३ मा कांग्रेस नेत्री एवं सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अम्बिका बस्नेत र एमालेका काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण राई विकासलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन् ।
दीपेन्द्र विष्ट, कार्तिक २७, २०७४
दुई युवाको उम्मेदवारीकै कारण यसपटक काठमाडौं क्षेत्र ४ मा चुनावी प्रतिस्पर्धा रोचक हुने देखिन्छ । लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट कांग्रेसका गगन थापा र वाम गठबन्धनबाट एमालेका राजन भट्टराई चुनावी मैदानमा छन् । दुवै उम्मेदवार घरदैलो अभियानमा व्यस्त रहँदा बाजी कसको पोल्टामा पर्ने हो ? अडकलबाजी भइरहेको छ ।
मतदाताको एउटै माग– समृद्ध काँठ
दीपेन्द्र विष्ट, कार्तिक २५, २०७४
चाबहिल–साँखु खण्डमा सडकका दायाँबायाँ भत्काएका जीर्ण घर, धुलाम्मे र हिलाम्मे सडक देखिन्छन् । दक्षिणढोकादेखि साँखु पुग्नजेल सडकको धूलोमै हराएर गाडी कुदिरहेका छन् । सडक दायाँबायाँका घरहरू भत्काउने क्रम पनि जारी छ । तर, तत्कालै यो सडक कालोपत्रे हुने सम्भावना भने छैन ।
गाउँ पसेनन् उम्मेदवार
दीपेन्द्र विष्ट, कार्तिक २१, २०७४
सुन्दरीजल मूलखर्ककी विना तामाङ सोमबार दिउँसो बारीमा गहुँ छर्नमा व्यस्त थिइन् । छेउकै पसलमा जम्मा भएका व्यक्ति निर्वाचनबारे गफिए पनि विनालाई कुनै मतलब थिएन ।
‘पहिला तपाईं, अनि म’
दीपेन्द्र विष्ट, कार्तिक १८, २०७४
जेब्रा क्रसबाट बाटो काट्न लाग्दा गतवर्ष वसुन्धरामा बसको ठक्करबाट सुनसरीकी २३ वर्षीया रविना चौधरीको मृत्यु भयो । ना४ ख ४२६२ नम्बरका चालक विनय तामाङले चलाएको गाडीले ठक्कर दिँदा चौधरीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो ।